Khabiir ayaa ku andacooday inuu jiro xiriir u dhexeeya dhul gariirka iyo qarax fulkaano | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Saadaasha hawada
Ka dib dhulgariirkii dhacay bishii hore iyo qarxintii Folkaanaha Popocatepetl ee Mexico, dad badan ayaa isweydiiyay haddii uu jiro a xiriirka labada. Khubaradii xilligaas ayaa beenisay. Sababaha ugu waaweyn waxaa ka mid ahaa masaafada u dhaxeysay xudunta dhulgariirka iyo volcano lafteeda. Boqollaal kiilomitir oo ahmiyad gaar ah, ayaa umuuqday inaysan muujinayn xiriir, sidaas darteed waa la diiday. In kasta oo ay taasi jirto, weli wuu xiiseynayaa, haddana khabiir cusub ayaa ka hadlaya suurtagalnimada in arintu sidan tahay.
Waxaan ka hadlaynaa Carlos Demetrio Escobar, oo ah khabiir ku takhasusay volcanoran-ka Salvadoran oo beeninaya mala-awaalkan hore. Iyada oo ku saleysan fiirintooda, xaddiga badan ee tamarta ee ka dhasha dhulgariir ayaa muuqda. Iyadoo la tixgelinayo dhulgariirkan xoogan, waxay xitaa sababi kartaa fulkaano firfircoon si ay u hesho awood dheeri ah. Intaas oo keliya maahan, wuxuu kaloo tilmaamay in dhulgariir u dhow buuraha volcano uu tilmaam u noqon karo waxqabadka volcano firfircoon.
Fulkaano iyo dhul gariir, cilaaqaadkooda
Qarxinta fulkaanaha waa qeyb ka mid ah cawaaqibka kororka heerkulka magma. Magma, oo laga dhex helay gogosha dhulka, waxaa kuleyli kara gariir gariir. Carlos Demetrio, wuxuu sharxayaa in tani ay ka mid noqon doonto sababaha keena wuxuu sababi lahaa qarxinta gariir ka dib. Daloolka sixirka, meesha dhagaxa dhalaalaya ee fulkaano firfircoon ka soo ururto, qaadan lahaa awood dheeraad ah. Tani waxay u tarjumi doontaa cadaadis sare, oo aakhirka kicin kara suurtagalnimada sare ee qarax.
Khabiirku wuxuu yidhi, volcano firfircoon waa mid aan ka fiirsan karno inay leedahay awooda lagama maarmaanka u ah soo bandhigida qaraxyada, ama taasi ay sameysay ka hor ugu yaraan 500 ee sano ee la soo dhaafay. Taasi waxay runtii kor u qaadi doontaa tirada "fulkaano firfircoon."
Escobar, wuxuu doonayay inuu cadeeyo waqti walba wuxuu ahaa taas ha ka sheekeynin dhulgariir iyo fulkaanaha, waa deg deg badan. Iskusoo wada duuboo, iyada oo la tixgelinayo in "qaab-dhismeedka" labaduba aad isugu eg yahay. Mid baa quudin kara ama ka xanaajin kara kan kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Khabiirka ayaa sheegay inuu jiro xiriir u dhexeeya dhulgariir iyo qarax fulkaano